Nhau - Ndezvipi zvakanakira nekusagadzikana kwePLA nePET bhodhoro rezvinhu mune yekuzadza indasitiri?
Ndezvipi zvakanakira nekuipira PLA uye PET zvinhu bhodhoro mukuzadza maindasitiri?
Zvichienderana nenyaya yemarara anopatsanura, mutengo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, bhodhoro rePLA ndiro rakanyanya muindasitiri yezvinwiwa?
Kubva munaChikunguru 1, 2019, Shanghai, China yakagadzirisa marara akaomesesa. Pakutanga, paive nemumwe munhu padhuze nemarara anogona kubatsira nekutungamira kupatsanura chaiko, vanoda kupatsanura zvinogadziriswa, Kicheni tsvina, imwe tsvina, tsvina ine njodzi nezvimwe.
Kubva penyaya yekumanikidza marara kupatsanura, mabhodhoro echinwiwa echinhu anoenda kupi? Kubva pamubvunzo unopisa kwazvo uye mhinduro pane iyo quora, Nei vasingaite mabhodhoro emvura / soda / mabhodhoro emukaka kubva muPLA?
Sezvatinoziva, mabhodhoro ezvinwiwa akagadzirwa nePET, PP, PE, PC. Mamwe emabhodhoro emvura emamineral, ari pasi pekupisa kwakanyanya uye acidic mamiriro, akadai semvura inopisa, asidhi, munyu wakasviba, vhiniga, nezvimwewo, inogona kuve nemakemikari kuparara Mineral mabhodhoro emvura anowanzo shandiswa panguva imwe chete. Inogona kudzokororwa asi isingadzikisike kwemazana emakore.
Bhodhoro rePLA richashatiswa mumakore makumi mashanu pasi pemamiriro ezvinhu echisikigo. Crystalline PLA, izvo chete zvinhu zvingangofungidzirwa kushandiswa mukudyidzana kwekudyidzana kwekushandisa, zvinoda mu-mudziyo composting (hydrolysis) kuita kuti chimiro chisavepo. Inoshandurwa kuita CO2 uye mvura ichisiya yakatenderedza 20% yehuremu hwepakutanga, asi izvo zvinoguma zvinongopa chimiro kune manyowa uye hapana zvinovaka muviri. Uku kuraswa nenzira kwayo, pane kuti zvishandiswezve.
Yakaverengerwa nekugadzirwa kwe500,000, mutengo weiyo 21-gramu pet preform iri 0.041 US madhora.
Mutengo weiyo 21-gramu PLA preform ndeye $ 0.182. Iwo maviri emitengo anosiyana nechinhu che4.5. Wakatarisana nemutengo wakadhura kudaro, vangani vanogadzira zvinwiwa vanogona kuzvitenga?
Segadziri mune yekumwa chinwiwa maindasitiri, Higee Machinery （Shanghai, Co, LTD inogona kupa iyo yakazara izere mutsetse kubva kugadzirwa kwemabhodhoro, kuwacha mabhodhoro ekuzadza capping uye kunyora kusvika kwekupedzisira kupakata.Kutanga shandisa preform yakatemerwa nekupisa, uye shandisa ichivhuvhuta muchina kugadzira preform kune ese mhando bhodhoro rechimiro. Bhodhoro robva raenda kune matatu mu1 monoblock kusuka kuzadza capping muchina. Bhodhoro rePLA rinokodzera matanho ese anomhanya mune matatu mu1 bhodhoro yekuzadza muchina?
Ndezvipi zvakanakira nekuipira PLA uye PET zvinhu bhodhoro mukuzadza maindasitiri? Ndeapi nyika anoshandisa mamwe mabhodhoro ePPL? Kugamuchirwa kuti ugovane mazano ako kuburikidza neemail admin@higeemachine.com uye runhare +86 18616918471. Ngatikurukurei pamwe chete.
Post nguva: Dec-17-2019